TAONA 2019 : Hohamafisina hatrany ny fanadiovana eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena
Omaly 10 janoary no tontosa ny lanonam-be fifampiarahabana nahatratra ny taona 2019 niarahan’ny zandarimariam-pirenena notronin’ireo manamboninahitra isan-tsokajony marobe, izay notanterahina teny amin’ny Toby Ratsimandrava. Nakotroka ny lanonana ary samy niara-paly avokoa ny rehetra . 10 janvier 2019
Nisy ny fandraisam-pitenenana nanokafana ny lanonana izay notarihan’ny Jeneraly Randriamanarina Jean Christophe. Nivoitra tamin’ny lahateny nifandimbiasana ny “ fitandroana hatrany ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandary ary tsy mitsahatra ny miady amin’io tranga iray io ny ambaratonga rehetra ao”. Ezahina hatsaraina isan-taona ny fomba fiasa ary tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny fanoherana ny fampanjakana ny kolikoly amin’ity taona vaovao vao manomboka ity.
Mba ho taom-pahombiazana no tanjona ary ahazoana vokatra tsara hatrany. Raha ny tatitra voaray mahakasika ny fitondran-tenan’ny zandarimaria sasantsasany nandika lalàna tamin’ iny taon-dasa iny dia nisy ny fitarainana azo ka miisa 46 izany ary ny 30 amin’ireo dia efa vita fitanana an-tsoratra avokoa. Ho hentitra sy hamafisina mandrakariva ny fanadiovana ny ao anatiny mba hatao fitaratra sy modely manoloana ny vahoaka malagasy iray tanindrazana.
Tokony tsy hadinoina fa noho ny firongatry ny fampanjakana ny kolikoly teto amintsika no fositra tsy mampandroso ny Firenena. Mila miray hina araka izany ny tsirairay mba hanamorana ny fanafoanana ity tranga iray ity.